ABAZALI BABANTWANA ABA-3 BASECALIFORNIA BABULAWA EMVA KWEPRANK 'YEDING, DONG, DITCH': 'KUFUNEKA SIXOLELE' - IINDABA
Abazali babantwana abathathu baseCalifornia babulawa emva komdlalo 'weDing, Dong, Ditch': 'Kufuneka sixolele'
Bafuna ukuba le ndoda ibanjwe kungquzulwano, uAnurag Chandra, iphume ezitratweni, kodwa ithi iya kujongana ‘nembopheleleko yobuthixo.
Emva kwenyanga bebhubhile oonyana babo ngethuba kutyholwa ukuba imoto yabo yagilwa ngomnye umqhubi endleleni, abazali babantwana abathathu baseTemescal Valley bayixolele indoda etyholwa ngokubulala la makhwenkwe.
Sikhonza uthixo wobulungisa, kwaye uyakuyihoya, utshilo uJanet Hawkins.
NgoLwesihlanu, ngoFebruwari 21, umhlali waseTemescal Valley uAnurag Chandra, 42, uwakhanyele amatyala amathathu okubulala namathathu okuzama ukubulala , kunye nesityholo esikhethekileyo sokubulala abantu abaninzi. I-CHP yathi, ngoJan. 19, wafaka imoto yakhe kwimoto ethwele abantwana abakwishumi elivisayo abathandathu. Okwangoku, iintsapho zamakhwenkwe zifunda ukuqhubeka.
Ngaphandle kokholo lwethu, andazi ukuba besiya kwenza ntoni. Andazi ukuba abantu bahlangabezana njani nale nto, badlule kuyo kwaye baphile, utshilo uRamona Ivascu ngeenyembezi.
‘Khalisa intsimbi emnyango ukuze ayive’
UCraig noJanet Hawkins, unyana wakhe uDaniel, oneminyaka eli-16, wasweleka nge-19 kaJan., 2020, bencokola kudliwanondlebe ngoMvulo, nge-17 kaFebruwari, 2020. (Ifoto nguMilka Soko, uMfoti onegalelo)
Aba bafana bekumele ukuba bemkile nje imizuzu embalwa ukuze benze iprank.
Babeza kuphuma, benze indlu enye nje, uze ekhaya, wathi uJanet Hawkins, unina kaDaniel Hawkins, 16, omnye wabafana abathathu ababhubhileyo, kunye noJoshua Hawkins, 13, owenzakeleyo kwingozi. Abanye bamakhwenkwe, bangena nje kwiikawusi zabo. Babengenazo nezihlangu. Unyana wam osoloko ephethe ifowni yakhe wayishiya endlini.
Ngobo busuku bangeCawa, uSergio Campusano, 18; UDaniel Hawkins, oneminyaka eyi-16; UJoshua Hawkins, oneminyaka eli-13; UYakobi uIvascu, oneminyaka eyi-16; UJoshua Ivascu, oneminyaka eli-14; noDrake Ruiz, 16; bebekwindlu kaHawkins eTemescal Valley emazantsi eCorona kwindawo yokulala.
Yayilixesha lokuba sidibane, sibhiyozele usuku lokuzalwa lukaYakobi, olusandul’ ukwenzeka, kwaye sibe nexesha elimnandi, utshilo uCraig Hawkins, utata kaDaniel.
Bachitha inxalenye yemini kwisitrato, bephosa ibhola ekhatywayo kunye nokutya ukutya okungenamsoco. Emva koko abafana bagqiba ekubeni badlale iNyaniso okanye i-Dare, ukubeka i-timer kwenye yee-smartphones zabo kunye nokuphosa ibhola emva naphambili. Nabani na owayenayo xa isibali-xesha sigqibile kwakufuneka enze umzamo.
Ngokwembali, ubuganga babo babumbuna.
Kufuneka usele icephe lesosi yeTabasco eshushu, utshilo uJanet Hawkins. Okanye baya kubumba iqela lezinto ezimbi kwaye kuya kufuneka usele. … Ngokuqhelekileyo ayibandakanyi ukuphuma endlwini.
UJoshua Ivascu wagqiba ngebhola. Isibindi yayinguDing, Dong, Ditch. Kwafuneka enkqonkqoze kummelwane aze abaleke ngaphambi kokuba aphendule umntu ongaphakathi.
Ngokuchasene neengxelo zokuqala, abafana babengazi ukuba ngubani ohlala endlwini kwi-Mojeska Summit Road ababeyikhethile. Bayichola loo ndlu kuba yayinesibane esimfusa.
Amakhwenkwe ethu anazo ezi zibane kwigumbi labo lokulala, utshilo uJanet Hawkins. Bakwiremote, batshintsha imibala, ngoko babona ezi zibane zinye baza bacinga ‘Owu, yindlu epholileyo le, banazo ezi zibane zifanayo.’
Baqhuba baya kwindlu kaChandra ezantsi kwesitrato waza uJoshua wankqonkqoza emnyango. Kodwa akazange afumane mpendulo.
‘Hayi, kufuneka ukhalise intsimbi emnyango ukuze ayive,’ uCraig Hawkins ucaphule la makhwenkwe esitsho. Ngoko wankqonkqoza emnyango de wafika lo mfo.
Ngokutsho kweCalifornia Highway Patrol, uChandra wayenomsindo. Emva kokuba la makhwenkwe etsibele kwiToyota Prius ukubaleka, uye wawaleqa ngemoto yakhe eyi-Infiniti, i-CHP inike ingxelo. AmaNgqina akhumbula ukubona i-Infiniti ibaleka emva kwePrius, phambi kokuba ide ibetheke kwenye imoto, iyiphose emthini oseTemescal Canyon Road naseTrilogy Parkway.
UJacob Ivascu wasweleka kwindawo yesehlakalo. UDaniel Hawkins kunye noDrake Ruiz basweleke kwakamsinyane kwiZiko lezoNyango lase-Inland Valley eWildomar.
‘Usizi olugqithisileyo noxolo olugqithisileyo’
U-Alex noRamona Ivascu, unyana wakhe uJacob wasweleka nge-19 kaJanuwari 2020, babambana ngezandla ngoMvulo, nge-17 kaFebruwari 2020, udliwanondlebe. (Ifoto nguMilka Soko, uMfoti oGalelayo)
Kubazali bala makhwenkwe mathathu, loo ntlungu yathotywa lukholo lwabo.
Lukholo lwethu olusigcina sizinzile kwaye lusinika ithemba lokuba sakukwazi ukuphinda simange ngenye imini, utshilo u-Alex Ivascu, utata kaYakobi. Andazi nje ukuba abanye abantu bahamba njani kuyo.
Umama kaJacob uthe ufumene usizi olugqithisileyo kunye noxolo olugqithileyo okoko kwasweleka unyana wakhe.
Ndiyazi kunye noYakobi kunye noThixo, kwaye akafuni kubuya, uRamona Ivascu uthe iinyembezi. Ndiyambulela uThixo ngokuba nabahlobo bakhe abasenyongweni.
Aba bafana bathathu badibana eOlive Branch Community Church kunye neSikolo saseCorona, apho bakhawuleza baba khona ayinakwahlulwa , ngokutsho kwabo babaziyo. Ngexesha lokusweleka kwawo, la makhwenkwe athe saa kwizikolo zamabanga aphakamileyo ezahlukeneyo. UDaniel noDrake, ababehlala eTemescal Valley, baya kwisikolo samabanga aphakamileyo saseCorona eSantiago nakwiSikolo samaBanga aPhakamileyo seCentennial, ngokulandelelana. UJacob, owayehlala eRiverside, wayefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iWoodcrest Christian. Kodwa aba bathathu bahlala bengabahlobo abasenyongweni.
OoHawkins basalindele ukuba uDaniel aphume kwigumbi lakhe aze ahlasele isikhenkcisi.
Uzakuhamba malunga nosuku lwakho kwaye ufumane ikawusi eyayikaDaniel, utshilo uJanet Hawkins. Into elula njengekawusi ibetha kum kwaye ndiza kuqala ukulila.
Ukususela kuAbraham ukusa kuYobhi, ukufelwa ngumntwana bekusoloko kuluvavanyo lokholo oluseBhayibhileni. Kodwa ezi ntsapho zintathu zathi azimqumbelenga uThixo.
Ukuba uThixo akanakundinceda apha, akanakundinceda naphi na, watsho uCraig Hawkins, uyise kaDaniel.
UCraig Hawkins, ecaphula uC.S. Lewis , wathelekisa ukufa konyana wakhe nokunqunyulwa ilungu lomzimba.
Uyazi ukuba uyakuphila, uyakuphila, kodwa uya kuphoswa yinto ethile, watsho. Siza kuqhubeka, kodwa asisoze silibale.
I-Ivascus inabanye abantwana abane, abaneminyaka yobudala ukusuka kwi-2 ukuya kwi-14. Oko kubagcina bexakekile kwaye bayeke ukuhlala ekulahlekelweni kwabo, ngokutsho kuka-Alex Ivascu.
Ngamanye amaxesha ufuna nje ukuphuka kwaye ukhale, kodwa awufuni, kuba ngokulandelayo, baya kuphuka baze bakhale, nabo, watsho.
UJedediah Jedi Ivascu oneminyaka emibini ubudala wayedidekile ukuba kutheni umntakwabo engayi ekhaya kwaye wabuza ngokuphindaphindiweyo unina apho uYakobi wayephi.
Intlekele kukuba wayifumana, utshilo uRamona Ivascu. Ngobunye ubusuku, ndaya kulala naye, waza wathi ‘Mama, uJacob ufumene ibhongo elikhulu waza uJacob wafa.’ Wandula ke wathi ‘uYoshuwa wafumana ibhongo elikhulu, kodwa akazange afe.
U-Alex Ivascu, unyana wakhe uJacob, oneminyaka eli-16, wasweleka kwingozi ye-19 kaJan., 2020, uthetha kudliwanondlebe ngoMvulo we-17 kaFebruwari 2020. (Ifoto ngu-Milka Soko, uMfoti onegalelo)
Emakhwenkweni Inkonzo yesikhumbuzo ye-28 kaJanuwari , kwiintsuku ezisithoba emva kokufa kwabo, amalungu entsapho axelela abantu abazilileyo ukuba sele emxolele uChandra.
Kuya kufuneka uxolele ukuxolelwa, utshilo u-Alex Ivascu. Ukuze sifumane uxolo lwethu, kufuneka sixolele.
Umfazi wakhe wayenezinye izinto awayefanele azenze ngaphandle kokuba nomsindo kuChandra, watsho.
Kwiintsuku ezimbalwa zokuqala emva kweso siganeko, ndandisonganyelwe yintlungu kunye nokuphelelwa lithemba kunye nokothuka okukhulu, andizange ndicinge kakhulu kuye, uRamona Ivascu uthe. Ukuba bendiqale ndacaphuka, bendiza kuphoswa kukuvisa unyana wam.
Kodwa oko akuthethi ukuba abamfuni uChandra, okhoyo ujongene namatyala amathathu okubulala namathathu okuzama ukubulala , ukubona ubulungisa.
I-Ivascus kunye noHawkins bafuna ukuba achithe ubomi bakhe bonke entolongweni. Kodwa uDebbie Ruiz, umama kaDrake, angaphila ngesigwebo esifutshane kancinci.
Amashumi amathathu anesihlanu ebomini kulungile kum, kuba ndiza kube ndingekho, utshilo.
Bonke bayavuma ukuba bafuna aphume ezitalatweni.
Lo mfo uyingozi kusapho lwakhe nakuluntu, utshilo uCraig Hawkins.
Kwanangaphambi koJanuwari 19, uChandra wayesengxakini yezomthetho: NgoDisemba 31, wamangalelwa kwiNkundla ePhakamileyo yaseRiverside County kunye. ibhetri ye-misdemeanor kwiqabane okanye umntu ohlala naye kunye nokwenzakala ngabom emntwaneni .
Eso sikhalazo sityhola ukuba wabetha umama womntwana wakhe kwaye wayivisa iintlungu ezingenasihlahla kwintombi yakhe.
Kodwa nokuba iinkundla azimgwebeli uChandra okanye afumane isigwebo esifutshane, abakwaHawkins bathi usezakujongana nolunye ubalo-mali.
Akukho mntu ubaleka nantoni na, kobu bomi okanye obulandelayo, utshilo uCraig Hawkins. Kukho uxanduva lobuthixo.
Abazali bamakhwenkwe baye bathetha ngokuchasene nabo bafuna ukugxeka usapho lukaChandra, abaluchaza njengamaxhoba, nabo.
Kukho intiyo eninzi kunye nobubi emhlabeni, utshilo uJanet Hawkins. Asifuni ukongeza kuloo nto.
Kwaye ngaphaya kobulungisa kwinkundla yomthetho, abazali bafuna ukuphendula kuChandra.
Ndifuna ubunini, utshilo uCraig Hawkins. Ndifuna ayenzele into ayenzileyo.
Ukuchacha ‘okuphawulekayo’ kwabasindileyo
Abanye abafana abathathu ababekwiPrius bayahamba kwaye babuyela kubomi babo besiqhelo.
UJoshua Hawkins uye wachacha ngendlela emangalisayo, ngokutsho kukanina. Ubuyele esikolweni ukusukela kwiveki ye-10 kaFebruwari.
Ugqirha uthe kwiinyanga ezintathu, uya kukwazi ukubuyela kwimidlalo kwaye enze into ebeqhele ukuyenza, utshilo uJanet Hawkins.
Kolu ngquzulwano, uJoshua Ivascu uye waqhawuka igxalaba, wophuka ukhakhayi kancinane kwaye kwafuneka athungwe.
Ungummangaliso wokuhamba, utshilo uRamona Ivascu.
USergio Campusano, oneminyaka eyi-18, owayeqhuba iPrius, uhlala nosapho lakwaRuiz. Uhamba kwakhona, nangona i-vertebrae eyaphukileyo emqolo wakhe, kodwa ushukunyisiwe, watsho.
Uyahamba, kodwa kubuhlungu, ndingatsho, uDebbie Ruiz uthe.
Abazali ngoku banexhala malunga noxinzelelo lwasemva kokwenzakala kunye neminye imiba yempilo yengqondo.
Yintoni (uYoshuwa) wabona ngobo busuku ... ndiyabulela kuba kwakumnyama, uRamona Ivascu uthe. Ndiyazi ukuba wabona ezinye izinto ...
Weva ezinye izinto, naye, u-Alex Ivascu wagqiba.
Okumangalisayo kukuba, iintsuku zokugqibela zobomi babo zaziphakathi kwamakhwenkwe, ngokutsho kwabazali bawo.
I-DA: Indoda yaseCalifornia etyholwa ngokubulala abantwana abakwishumi elivisayo abathathu yangena kubo emva kokuba 'i-ding-dong' igxothe ikhaya layo
Ukubulala, ukuzama ukubulala amatyala afakwe kwingozi yaseCalifornia eyashiya ulutsha olu-3 lufile, abathathu benzakele
Abakwishumi elivisayo abathathu baseCalifornia babulawa kwingozi yemoto emva komdlalo 'womjelo weDing Dong' 'babengenakuhlukaniswa'
Umrhanelwa kwingozi yemoto yaseCalifornia ebulalayo ujongene nokuxhatshazwa kweqabane, amatyala okwenzakala kwabantwana
Umqhubi waseCarlifonia ubethe ngabom imoto namakhwenkwe ayi-6, ebulala aba-3 kwaye benzakalisa aba-3, utshilo i-CHP
Ngomhla we-18 kaJanuwari, ngosuku ngaphambi kokufa kwabo, abafana babekwindlu ka-Ivascus e-Riverside, bedlala ibhola kwibala elikhulu elingasemva.
Emva koko, bakhulula zonke iimpahla zabo kwaye batsibela echibini, elalibanda kakhulu, utshilo uRamona Ivascu.
Emva kokuba bengenile bamisa, abafana bafota omnye nomnye bejijisana. Aba bantwana, ngokwenene bayazi indlela yokuzonwabisa, kodwa ngendlela elungileyo.
Yaba, omnye wamakhwenkwe wathi emva, olona suku lungcono, watsho.
Aba bantwana babebakhulu kunobomi, babhiyozela ubomi, baphila ubomi, utshilo uCraig Hawkins. Aba ngabantwana ongathanda ukuhlala ecaleni kwakho.
Ubomi babo babufutshane - kodwa bulungile.
Iminyaka eli-16 ayiphilayo, uphile kakuhle kakhulu, utshilo uRamona Ivascu.